Agaasimiyaasha Wasaaradaha dowladda oo tababar loo furey – Radio Muqdisho
Tababarkan maanta loo furay agaasimayaasha Wasaaradaha dowlada fedaraalka ee Soomaaliya ayaa waxaa bixinayay xafiiska Hant-dhowrka guud ee Qaranka waxaa uu tababarka uu socon doonaa mudo sedax maalmood ah, waxaana lagu baran doonaa maamulka wanaaga iyo la dagaalanka musuq maasuqa.
Hanta dhowraha guud ee Qaran Mudane Nuur Faarax Jimcaale oo saxaafadda la hadlay ayaa sheegay u jeedada tababarkan ay tahay kor u qaadidda aqoonka la xiriirta maamulka wanaagga oo ay yeeshaan Agaasimiyaasha Wasaaradaha dowladda Soomaaliya.
“Inaga waxaa naga go’an in aan hagaajino hanaankeeda maamulka arintana qeyb ayay ka tahay hagaajinta maamulka dowladda Soomaaliya” ayuu sheegay Hanti-dhowrka guud ee Qaranka Nuur Faarax Jimcaale.
Tababarkan maanta u furmay agaasimayasha wasaarqaha dowlada Soomaaliya ayaa qeyb ka noqonaya dadaalada dowlada Soomaaliya ay ugu jirto hagaajinta mamaulka suuban ee hay’adda dowladda Soomaaliya.
Kulan ay ka wada qeyb galeen Wasiirro iyo Saraakiil ciidan oo ka dhacay Muqdisho"sawiro'